स्वास्थ्य/जीवनशैली – tvNEPALI
के हो त रुद्राक्ष...
रुद्राक्षको किस्सा त तपाईंले कति सुन्नुभयो, कति । एकमुखे रुद्राक्षको मूल्यदेखि बहुमुखे रुद्राक्षको गुणगानसम्म सुनिसक्नु भएकै छ । ठमेलतिर घुम्न निस्कनुहोस् वा पशुपतिनाथ, रुद्राक्षकै दोकान देख्नुहुनेछ । तपाईंलाई लाग्दो हो, यदि धेरै रुद्राक्ष कसेले किन्छ ? किन किन्छ ? हामीले...
धेरै नुनको सेवनले शरीरमा...
नुन खानालाई स्वादिष्ट बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। नुन बिनाको खाना खल्लो हुन्छ। तर नुनको सही मात्रा नलिएर बढी लिंदा जीवन नै खल्लो बन्न समेत पुग्छ। यहाँ बढी नुन खानाले शरीरमा हुन सक्ने हानीको बारेमा चर्चा गरिको छ १. धेरै...
१४८ प्रकारका रोग गाईको...
स्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । गाईको घ्यूले बढेको कोलेस्टोरल ठीक गराउँछ । गोरस मुटुरोगमा समेत लाभदायक रहेको तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने रेडियोधर्मी कणको...
अहिलेको बच्चा किन उमेर...
वसुन्धराकी युना विष्ट उमेरले भर्खर पाँच वर्ष पुग्नै लागिन् । तर उनको कुरा सुन्ने हो भने उनी निकै परिपक्क लाग्छ । नेपालीमा एउटा उखान नै छ नि, खुकुरी भन्दा कर्द लाग्ने । अहिलेका बच्चाहरु त्यस्तै भएका छन् । आमाबुबाभन्दा एक...
खानपानको उत्तम शैली
भोक लाग्दा हामि केहि वास्ता गर्दैनौ कहाँ बसेर, कसरी, कति, कुनबेला खाने भन्ने हामीलाई त्यती मतलब हुँदैन । यसो हुनुमा दुई कारण छन् । एक त हामी धपेडीपूर्ण दैनिकीबाट गुजि्ररहेका छौं । त्यही कारण आरमसाथ बसेर खाने मेलोमेसो मिल्दैन ।...
बालबालिकाको दाँत किराबाट यसरि...
आधुनिकताका नाममा डब्बा बन्द र प्याकेट बन्द खानेकुरा, जंक फुड, चकलेट, कोल्ड ड्रिंक्सलगायतका खाद्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ । यस्ता खाद्यको प्रयोगले हाम्रो खानपानसँगै जीवनशैलीसमेत बदलिदिएको छ । साथमा यसले हाम्रो देश नेपालका आधाभन्दा बढी बालबालिकाको दाँत किराले खाएको छ...
फेसियल के हो र...
लामो समयसम्म अनुहारको सुन्दरतालाई यथावत कायम राख्नको लागि फेसियल एउटा यस्तो पर्क्रिया हो यसको माध्यमबाटछालामा एक प्रकारको चमक छाउनुको साथै अनुहारमा ताजापन कायम भै रहन्छ र विभिन्न प्रकारको समस्याबाट अनुहारलाई टाढा राख्छ । फेसियलले फोस्रो अनुहार आकर्षण देखिनुको साथै हामीलाई...
दिनको एउटा स्याउ खाँदा...
दिनको एउटा स्याउ खाँदा डाक्टरकहाँ धाउनुपर्दैन भन्ने पुरानो आहान नै छ । वास्तवमा स्याउ एकदमै स्वस्थकर खानेकुरा हो । स्याउमा एन्टीअक्सिडेन्ट, फाइबर र फ्लेभोनोइड प्रशस्त पाइनछन् । यसमा भएको फाइटोन्युट्रिएन्टले धेरैथरी फाइदा गर्छ । स्याउमा धेरै पानी र फाइबर हुन्छ...
यस्तो मेकअप वर्षायाममा हुन्छ...
वर्षायाममा मेकअप गरेर बाहिर निस्कदा पानीले पखालिने डर । पसिनाले लतपतिने डर । तर, मेकअप त गर्नैपर्छ । विवाह , व्रतवन्ध होस् वा कुनै सभा ,समारोह । हरेक कार्यक्रममा महिलाहरुका लागि मेकअपको ठूलो महत्व हुन्छ । मेकअपले नै महिलालाई सुन्दर...
पुरुष र महिलाको मिल्दोजुल्दो...
हामी विभिन्न कुरामा महिला र पुरुषलाई अलग राखेर हेर्छौं । उनीहरुको प्रवृत्ति, व्यवहार, सोंच, चिन्तन, रुची सबै कुरा । पुरुष र महिलालाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण अलग छ तर महिला र पुरुष, जसमा हुने खास भिन्नता भनेकै शारीरिक संरचना मात्र हो...
प्रकृतिको असन्तुलनले सिंगो विश्वलाई...
अहिले लेकाली भेगमा पनि तापमान बढेको छ । मधेसमा त गर्मीको राप थामिसक्नु छैन । चाँदी झै टल्कने सेता हिमाल पग्लिएर कालो पत्थरमा रुपान्तरण हुँदैछ । दुई महिनापछि पाक्ने बाली अगाडि नै पाक्न थालेका छन् । हिँउ नपर्ने सिनजमा हिँउ...
चिकित्सकलाई कहिले नलुकाउनुस यस्ता...
चिकित्सकले कुनै उपचार सुरु गर्नुअघि बिमारीको स्वास्थ्य-इतिहास बुझ्न खोज्छन् । बिमारीलाई यसअघि के भएको थियो, कस्तो रोग लागेको थियो, त्यसको उपचार कसरी गरियो, के औषधी खुवाइयो आदि । यसबाट के थाहा हुन्छ भने, उनको रोगको जड के थियो ? त्यसको...